Best acoustical huso, 3d emadziro epaneru, acoustic mataira, acoustic yekumhanyisa pani vagadziri uye vatengesi | Vinco
Polyester fiber acoustic pani
Polyester fiber acoustic pani inogadzirwa ne100% fiber, mushure mekupisa-yakamanikidzwa kuita donje chimiro. Uye isu tinoshandisa dzakasiyana hot- yekudhinda kuti tisvike kwakasiyana density uye nechokwadi mweya wayo, zvinoita kuti ive inova yakanaka kurira kwekutora uye kuputira zvigadzirwa.
Chigadzirwa zita Polyester fiber acoustic pani
Zvishandiso 100% yepamusoro polyester fiber
Saizi 1220 * 2440 * 9 / 12mm (zvimwe ukobvu zvinogona customized)
Kuwandisa 160- 229kg / M3
Ruvara Chati yemuvara
Inzwi rinotora maitiro 0.85
Fire nemishonga Bhuku B1
Zvakatipoteredza Bhuku E1
Chimiro cheAngle Chamfer, yakatwasuka
Kushanda Studio, kindergarten, cinema, studio, nezvimwe.
Polyester fiber acoustic pani mifananidzo:
Polyester fiber acoustic pani zvakanakira:
1) Kuisa kuri nyore
2) Eco, Isinganhuwi, Kuchengeteka uye nyore kuchenesa
3) Yakanaka yekushongedza mhedzisiro, uye anopfuura makumi mana marudzi emarudzi
Polyester fiber acoustic panel application:
Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba dze opera, mafirimu uye dzimba dze terevhizheni, studio dzekurekodha, dzimba dzekutepfenyura, nhepfenyuro dzeTV, dzimba dzemabasa akawanda, makamuri emusangano, dzimba dzemakonzati, mahotera, maguta ekuzorora uye evaraidzo, mahotera, KTV, nezvimwe.
Kutumira & kurongedza:
Izvo zvinhu zvinorongedza mu polybags
Kutakura: Negungwa kana nendege
1. Basa - Tine vashandi vekutengesa. Chero mibvunzo ichapindurwa mukati maawa makumi maviri nemana.
2. Mutengo - Nekuti tiri fekitori, saka tinogona kupa mhando yepamusoro uye zvigadzirwa zvemitengo yakaderera.
3. Sevhisi - Nyore uye nyore kutakura, tinovimbisa yakakodzera nguva yekuendesa, uye yakanaka mushure mekutengesa sevhisi.
4. Chikwata - Tine dhipatimendi redu reinjiniya, zvinoenderana nechikumbiro chako cheako chakagadzirirwa chigadzirwa chako.
1. Isu tinofara kwazvo kuti mutengi anotipa imwe pfungwa yemutengo uye zvigadzirwa.
2. Kana paine chero mubvunzo, ndapota tizivise iwo pakutanga neemail kana runhare. Tinogona kubata navo iwe nekufamba kwenguva.
1. Kana mutengi aine chero kuronga muChina, ndapota tizivise. Tinoda kukubatsira kubhuka hotera uye kukutora kubva pachiteshi chepamhepo, kana kuchiteshi chechitima.
2. Chero mamwe matambudziko, ndapota inzwa wakasununguka kubvunza, uye isu tichaedza nepatinogona napo kukupa iwe!
Tichitarisira kubvunza kwako nemutsa
Pashure: Acoustic kurapwa mabass musungo
Zvadaro: Kupeta chikamu, kupeta chikamu chikamu
Mubvunzo: Uchatora nguva yakareba sei kuita sampuli?
A. Kazhinji isu tinotora 1 ~ 7 mazuva kuti tiite iwo masampuli.
A.Nguva yekuendesa iri mukati memazuva 15-25 mushure mekutambira dhipoziti.
Mubvunzo: Unobhadharisa muyero here?
A.Standard sampuli dzakasununguka, asi masampuli akagadzirwa anozobhadhariswa nemutengo unonzwisisika uye nhumbi dzinobhadhariswa. Mushure mekunge odha yacho yasimbiswa, isu taizobhadhara iyo chaiyo yekubhadhara. Ndokumbirawo uve nechokwadi cheizvozvo.
A: Kubhadhara <= 1000USD, 100% pamberi. Kubhadhara> = 1000USD, 30% T / T pamberi, chiyero usati watumirwa.
Mubvunzo: Unogona kugamuchira OEM?
A: Hongu, semugadziri, tinogona kuvhura muforoma kuburitsa chero acoustic pani zvigadzirwa zvinoenderana neyako sampuli kana kudhirowa.
Kana uine mumwe mubvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kutaura nesu, maita basa!
Kushongedza 3d emadziro epaneru, acoustic inodzivirira, ...
Inotora pani, 3d acoustic pani, inoteedzera m ...
Acoustic pani inodzivirira, acoustic madziro kusvika ...